Jab wayn oo soo gaaray Liverpool xilli uu soo dhawaaday furitaanka xilli ciyaareedka cusub – Gool FM
Jab wayn oo soo gaaray Liverpool xilli uu soo dhawaaday furitaanka xilli ciyaareedka cusub
MUNICH, GERMANY - AUGUST 02: Adam Lallana of FC Liverpool and Angel Correa of Atletico Madrid fight for the ball during the Audi Cup 2017 match between Liverpool FC and Atletico Madrid at Allianz Arena on August 2, 2017 in Munich, Germany. (Photo by Jan Hetfleisch/Bongarts/Getty Images)
(England) 05 Agoosto 2017. Liverpool ayaa waxaa soo gaaray dhabar jab xoogan xilli uu bilaaban rabo Premier League kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray xiddigooda Adam Lallana.
Laacibka reer England ee qadka dhexe ka ciyaara ayaa seegi doona bilowga kal ciyaareedka cusub kaddib dhaawac ka soo gaaray Finalkii Audi Cup ay la yeesheen Atletico Madrid arbacadii.
Lallana ayaa garoomada ka maqnaan kara ilaa bisha November, dhaawaca soo gaaray 29 jirka ayaa sidoo kale dhabar jab xoogan ku ah tababaraha xulka England Gareth Southgate kaa oo ciyaaraya kulamada uga harsan isreeb reebka koobka adduunka.
Macallinka Reds Jurgen Klopp oo ka hadlay dhaawaca laacibkiisa ayaa sheegay in hubaashii aysan ahayn akhbaar ay doonayaan inay dhagahooda ku soo dhacdo.
Wuxuuna caddeeyay inuusan garoomada ka maqnaan doonin usbuucyo balse uu maqnaanayo bilooyin intaa kaddibna ay indho indheyn doonaan waxa ka soo baxa dhaawiciisa.
Lallana ayaa bil maqnaa bishii March ee la soo dhaafay kaddib dhaawac ka soo gaaray waajibaadka xulkiisa qaranka.
Laakiin waxaa la aaminsan yahay in dhaawacan uu ka khatar badan yahay midkaa iyadoo laacibkii hore ee Southampton uu xitaa garoomada ka maqnaan karo kulamada ay Liverpool ciyaareyso wareega group yada Champions League waa haddii ay is reeb reebka ka soo gudubto.
Reds ayaa shalay lagu aadiyay kooxda Hoffenheim ee dalka Jarmalka iyadoo lugta hore lagu soo ciyaari doono Jarmalka 15-ka bishan.
Waxay noqon doonta markii saddexaad ay Liverpool la ciyaarto koox ka socota dalka jarmalka intii uu xilka Anfield qabtay Jurnge Klopp.
Waxool iyo Bariga Dhexe oo wada ciyaari doono kullan kala bax ah
“Ha u sheegin taageerayaasha inaan la sii joogayo Barcelona.”. Neymar oo ehbiyay Pique